अनन्त अनन्त सम्म !! - Own Things ~ आफ्नै कुरा
अनन्त अनन्त सम्म !!
प्रकाशित गरिएको मिति : 17 December 2009
फोटो : human-rights-in-nepal.blogspot.com
भो अब मलाई नचलाऊ !
तिम्रो धम्किहरुमा अब चेपिएर बस्ने छुइन ।
भनिन्छ मरेको लाश लाइ चलायो भने
प्रतिक्रया दिन्छ रे - हल्लिएरै भए पनी !!
म त एउटा जीवित मानब हु ।
चुप चाप लागेर सधै - रमिता हेर्ने
पिल्सिएरै जीवन उत्सर्ग गर्ने
नेपाली होइन - म !!
धेरै कथाहरु संगै
धेरै सपनाहरु साचेको छू ।
तिम्रा अबहेलनाहरूले - निकै बज्र सहेको छू ।
निकै चोट दिने जात्राहरु
नहेरेको कहा हो र !
हेरिरहेको छू तर
हेर्दा हेर्दै अन्धो भैसकेको छू !
(सायद अब म पुन: हेर्न सक्दिन )
हिड्दा हिड्दै लंगड़ो भएछु
( सायद अब म पुन: हिडन सक्दिन)
श्वास फेर्दैछु - श्वास फेर्दा फेर्दै
श्वास फेर्नै विर्सेछु / सकिन'छू
म त मृत पो भैसकेछु,
तर पनी केही छैन
मेरो मृत लाशले - बिरोध जनाउने'छ ।
मेरा शब्दहरुले - गिज्याउने छ ।
मेरा अक्षरहरूले - जिस्काउने'छ !
मैले लेखेका लेखाइले - सराप्ने छ !!
मेरो कलमले सधै - प्रतिक्रया जनाइरहने'छ !
6 Comment / प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
Ashesh said... December 17, 2009 at 9:03 AM
एकदमै मनपर्यो । तर म सधैँ भन्छु, कविताको वारेमा केहि वोलिहाल्ने आँट चाहिँ गर्न सक्दिन म । 'मरेको हुनुपर्ने 'मेरेको' भएछ सुरूमा । एकछिन त अड्किएँ म । तर कविताको भाव मनसम्मै पुग्यो । लेखकको कुशलता झल्किएको छ कवितामा.....
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) said... December 17, 2009 at 9:38 AM
यहाँ लाइ मुरी मुरी धन्यबाद ! Ashesh G !
गल्ती औलाई दिनु भएको मा यहाँ लाइ धन्यबाद मैले उक्त गल्ती सच्याई सके !
दीपक जडित said... December 17, 2009 at 11:06 AM
कविता राम्रो लागेरै पनि कस्तो कस्तो लाग्यो । सायद माथी भनिएको
"म त एउटा जीवित मानब हु ।
नेपाली होइन - म !!" लाई तल पुछारतिर लेखिएको भए र त्यसमा पनि "नेपाली होइन - म !!" को ठाउँमा अर्थोकै केहि भएको भए अझै खुल्थ्यो जस्तो लाग्यो ।
राजेश बुढाथोकी 'नताम्स' said... December 18, 2009 at 10:36 PM
वाह !! कविताले मन छोयो मेरो । यस्तै पोष्टको आशमा छु ।
कृष्णपक्ष said... December 19, 2009 at 1:30 PM
वेद्नाथ जी, धेरै पछि कविता लिएर आउनु भएछ धेर खुसि लाग्यो ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) said... December 24, 2009 at 1:12 AM
दीपक जडित ,राजेश बुढाथोकी 'नताम्स', र कृष्ण जी धयाबाद - तपाईहरुको अमूल्य कमेन्ट को लागी !